संक्रमणदर बढेपछि साउनको दुई गतेपछि पुनः कडा निषेधाज्ञा ! – OnlinePahar
संक्रमणदर बढेपछि साउनको दुई गतेपछि पुनः कडा निषेधाज्ञा !
२८ माघ २०७७, बुधबार १३:१० Basanta Khanal	0 Comments	lockdown
काठमाडौं । आउने साउन दुई गतेदेखि पुनः निषेधाज्ञा हुन्छ ? यो प्रश्नले सार्वजनिक यातायातमा चर्चा पाइरहन्छ। सर्वसाधारण जम्मा भएको ठाउँमा पनि यो प्रश्नले स्थान पाउँछ। सरकारले कर उठाउनैका लागि मात्र खोलेको हो भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। को’रोना रोकथाम तथा नियत्रण गर्न बनेको विधेयक २०७८ ले डिसीसीएमसीलाई को’रोना नियन्त्रणको जिम्मेवारी दिएको छ। काठमाडौं उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको बैठकले २०७८ को बैशाख १६ गतेदेखि लगाएको नि’षेधाज्ञा असारको दोश्रो साताबाट स्मा’ट्र निषेधाज्ञा हुँदै खुल्ने क्रममा छ। शनिबार पनि बैंकहरु खुल्ला भएपछि पनि कर उठाउनकै लागि पनि निषेधाज्ञा खुलेको आरोपलाई अझ म’जबुद् बनाएको छ। सार्वजनिक स्थान र यातायातमा हुने छलफलका बारेमा ललितपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढुण्डीप्रसाद निरौला को’रोनाको संक्रमणदर बढेपछि निषेधाज्ञामा जान सकिने तर्फ संकेत गर्छन्।
यो पनि पढ्नुहोस् : पोखराको मध्यभाग हुँदै बग्ने सेती नदीको किनार क्षेत्रको धाँजा फाटेसंँगै खसेको डिस्कोले नदी थुनिन सक्ने जोखिम बढेको छ । सेती नदीस्थित रातोपहिराको अमिनताराको डिस्को खसेपछि सेती नदीमा नदी थुनिन सक्ने जोखिम बढेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् । पोखरा–१७ रातोपहिराकी एक स्थानीय रेस्टुराँ व्यवसायी अस्मिता क्षेत्रीले सेती नदीमा ठूलो डिस्को खसेर नदी थुनिन सक्ने भएकाले चिन्त्ता व्यक्त गरेकी छन् । सेती नदी थुनिन सक्ने जोखिमलाई समयमै व्यवस्थापन गर्न उनले माग गरेकी छन् । जोखिम रहेको उक्त क्षेत्रमा हाल रातो रिबनमात्र लगाइएको छ भने उक्त क्षेत्रमा तत्काल तारबार लगाउनु पर्ने अमिनताराकी स्थानीय केशरानी कटिकले बताइन् । पहिरोभन्दा करिब ४० मिटरनजिक घरमा आफूहरू हाल जोखिम सहेरै बस्न बाध्य भएको उनले जनाइन् । केही दिनअघि परेको ठूलो वर्षात्का कारण केही समय अघिदेखि चर्किएको भागसहितको डिस्को सेती नदीमा खसेकाले अमिनताराको बस्ती नै हाल पहिरोको उच्च जोखिममा परेको पोखरा महानगरपालिका–१५ का वडाध्यक्ष प्रकाश पौडेलले बताए । पोखरा महानगरपालिकाले ५० मिटरको सेती नदी किरानको मापदण्ड घटाएर ३० मिटरमा कायम गरेसँंगै सेतीनदी क्षेत्रको धेरै बस्ती नै उच्च जोखिमा भएको अध्यक्ष पौडेलको दाबी छ । उनका अनुसार हाल अमिनताराका दुई घर पूर्णरूपमा क्षति भएको छ भने दुई घर विस्थापित भएका छन् । गत मंसिरमा केही भाग खस्न सुरु भए पनि यस वर्षको पानीले असार २४ गते बिहीबार २० मिटरको चौडाइ र एक सय मिटर जति लम्बाइको भाग खस्न पुगेको अध्यक्ष पौडेलले बताए । अमिनताराका करिब १७५ घरधुरीले खानेपानीको बोरिङसमेत यसपालिको पहिरोले लगेको उनले जनाए ।
← यसरी तंग्रिदै छ मेलम्ची, केन्द्र सरकारको साथ
पाथिभरा माताले हामीसबैको रक्षा गरुन, आज – २८ आषाढ २०७८ सोमवारको राशिफल पढौं →
इन्टरनेट सेवाभन्दा आधा सस्तो मूल्यमा निषेधाज्ञाकै बीच सीजीले सुरु गर्यो उपत्यकामा इन्टरनेट सेवा
एक वर्षको अन्तरालमा उच्च विन्दुमा शेयर बजार, यस्तो अवस्थामा कसरी गर्ने लगानी?
बुटवल लुम्बिनी एफसीलाई काठमाडौँ रेजर्सले हरायो
२८ माघ २०७७, बुधबार ०९:०६ Basanta Khanal	0